यसो भन्छन् विद्यासुन्दरका सहपाठीहरु |
यसो भन्छन् विद्यासुन्दरका सहपाठीहरु
प्रकाशित मिति :2017-05-09 12:27:07
दिनभर कार्यक्रम कार्यक्रले थाकेका बिद्या सुन्दर लाई साझमा पनि एउटा कार्यक्रमको निम्तो थियो । कार्यक्रम थियो बानेश्वरको एलिनाज् बे्रकरीमा । तोकीएको समय भन्दा दश मिनट ढिलो पुगेका बिद्या सुन्दरलाई लिन उनका साथीहरु बाटोमै कुरेर बसेका थिए ।
बिद्या सुन्दर गाडीबाट भर्नासाथ बसैले जुरुक्क उचाले कोही खदा लगाउदै अंगालो मार्न थाले । केही बेर बाटैमा यो क्रम चल्यो । हातका खदा सकिएपछि हलमा लिएर गए जहा सयौको संख्यामा उनि बच्चा हुदा देखि स्कुलमा र कजेज पढेका साथिहरुको जमघट थियो ।
उनि हलमा पस्नासाथ एकैोटी सबै कराए । ओइ बिद्या सुन्दर ०३६ सालमा विश्व शान्ती निकेतन माबिको पढाइ सकेर निस्कीएका साथीहरु एकैठाउ देख्दा एकछिन त बिद्या शुन्दर रनभुल्लै परे । ओहो सबै जना यहा कसरी ?
एकैछिन् त्यहा चकमन्नै भयो । सगै पढेको साथी माहानगरको मेयर बनेर अगाडी देख्दा साथीहरु खुशिले मुक थिए भने बच्चा देखिका साथीलाई एउटै ठाउमा देखेर बिद्या शुन्दर खुशि र आश्चर्य मिसिएको भावमा एकछिनसम्म हेरे मात्र ।
त्यसपछि फेरी शुरु भयो उनलाई खदा ओडाउने कार्यक्रम । खदा लगाउदै उनिसँग फोटो खिच्ने कार्यक्रम निक्कै बेर चल्यो । खदा लगाउदै हरेकले चुनाव खर्च भन्दै झण्डै दुई लाख त्यहि उठाए र बिद्या सुन्दरको हातमा राख्दै भने हामी जुनजुन, पेसा ब्यावसाय र पार्टीको भएपनि साथी हौ, कस्तोमा हामी चाहिन्छौ भन । तिमी जस्तो मान्छे महानगरले पाउनु भाग्यको कुरा हो । भोट मात्र हैन ,हाम्रो तन मन सबै तिमिलाई । सबै आ–आफ्नो पेशा ब्यावसाय गरेर बसेका साथीहरुले यसरी एकै पटक माया, सहयोग, सम्मान र आदर गरेको देख्दा उनि भावबिह्ल देखिन्थे । कार्यक्रममा सहभागि बिभिन्न पेशा ब्यावसाय सम्हालेर बसेका ति साथीहरुका आखामा बिद्या शुन्दर कस्ता मान्छे हुन भनि सोधेको प्रश्नमा उनिहरुको जवाफ यहा समेटेका छौ ।
कुल अधिकार – उनि मान्छे मात्र होइनन । एक अशल ब्याक्ति पनि हुन हामी स्कुलमा पढ्दा उनि जस्तो हुन खोज्थीउ तर सक्दैन थिउ । आज पनि उसका हरेक बानि ब्यमवहार चोरौ चोरौ लाग्दा छन् । यति अशल मान्छे यो महानगरले पाउनु धेरै खुशिको कुरा हो ।
गुएश्वरी श्र्रेष्ठ– साच्चै भन्दा केटीहरुको त प्रिय पात्र उ सधै । एक जानको मात्र हैन सबैको । अहिले मेयर भयो भनेर भनेकै हैन सबैलाई यहा सोध्नुस सबै भन्दा इमान्दार र सहयोगी साथ्ी को थ्यो भनेर ? सबैले उसको नाम लिन्छन् ।
शंकर गुरुङ , एलिनाज् बेकरीको मालिक
हामी त, त म, म गर्ने साथी हौ । म गुरुङ उ नेवार तर कहिल्यै उ सले मलाई त्यस्तो जात छुट्याएर हेरेन । हामी कति झगडा गर्थिउ अरु अरु साथी सग तर उसग कहिल्यै झगडा भएन । किनभने उ कहिल्यै सिसाउदैनथ्यो । महिले कहिल्यै उसको अनुहारमा रिस देखेको छैन ।
डा. आन्जेल ताम्म्रकार
उ कहिले झगडा गरेन तर उ हरेक झगडा मिलाउन पुग्थ्यो । उसले भनेपछि सबैले मान्थे । उ कम बोल्ने हासिरहने स्वाभावको मान्छे हो तर उसले आटेपछि काम पुरागरेरै छोड्थ्यौ । हामीलाई कक्षामा सात जना जान्ने बिद्यार्थी छानेर मनिटर राख्नुहुन्थ्यो । त्यो सात जनामा म उ र अरु साथि थियौ । यति भनौ उ लगनसिल मान्छे हो । आटेको काम पुराएर छोड्छ ।
हिरम्ब राज मावीका प्रधानाध्यापक
उहा म आउनु भन्दा धेरै अघिको ब्याजको बिद्यार्थी हुनुहुन्छ । तर पनि कक्षामा सरहरुले उदाहरण दिदा उहाँको नाम लीन्छन् । त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर बन्चाहरुलाई उहाको लगनसिल र सालिनताको उदाहरण दिइन्छ । हाम्रै विद्यालयमा तारा देखि, नलीना चित्रकार राम शरण महतसम्म यहि स्क’लमा पढेका छन् । त्यसमा उहाको नाम झनै ठुलो अक्षरमा लेखिनेछ ।
एसले कसैलाई दुःख दिदैनथ्यो त्यसैले केटा होस या केटी सबै उसको साथी हुन्थ्यो । हामी चाहि हावादारि मान्छे थियौ उसको साथ लागे पछि सबै एटेन्सन हुन्थीउ ।
बिजय मल्ल –यत्रो धेरै साथी भेलाहुनु भनेको नै एउटा सन्देश हो कि उ कति धेरै साथीसग नजिक हुनसक्दो रहेछ भन्ने उसको आँखामा सबै बरमवर । म त यति गुणी ब्याक्ति कसरी नेता भयो जस्तै लाग्छ । उसग काम गर्ने बाहेक यताउता केही आदैन ।
टेक्वाण्डोको अन्तराष्टिय रेफ्री तथा प्रशिक्षक । उसको अनुहारको सुन्दरता उज्यालो पन जति छ नि भित्र पनि त्यतिनै छ । सानो ठुलो , जात भात सबै समान उसको । नेतामा हुने गुण उ सग पहिल्यै थियो ।
‘वर्तमान सरकारलाई संविधान संशोधनको अधिकार छैन’
‘सरकार स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दैछ’